ဒေါ်နယ်ထရမ့် နဲ့ သံအမတ်ကြီး နီကီဟာလေးကြား ချစ်သူပုံစံမျိုးရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးရှိနေလို့ သတင်းထွက် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး ဒေါ်နယ်ထရမ့် နဲ့ သံအမတ်ကြီး နီကီဟာလေးကြား ချစ်သူပုံစံမျိုးရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးရှိနေလို့ သတင်းထွက်
WASHINGTON, DC - MARCH 29: U.S. President Donald Trump greets U.N. Ambassador Nikki Haley during an event celebrating Women's History Month, in the East Room at the White House March 29, 2017 in Washington, DC. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန် သံအမတ်ကြီး နီကီဟာလေးက သူအနေနဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ ချစ်သူတွေပုံစံမျိုး အရင်းရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုတွေရှိနေတယ်ဆို တာတွေကမှန်ကန်မှုမရှိဘူးလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
နီကီဟာလေးက ဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ထွက်ပေါ်နေတဲ့ သတင်းတွေ ဟာ မှန်ကန်မှုမရှိဘဲ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေသာဖြစ်ကာ အဆင့်မြင့်ရုံးတွေ မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီး မှန်သမျှ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြသာနာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
မကြာသေးမီ က ဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ နီကီဟာလေးတို့ ရဲ့ပုံတွေ ဟာအွန်လိုင်းမှာပျံနှံခဲ့ပြီးသူတို့ နှစ်ဦးဆက်ဆံရေး ဟာသာမန်ထက်ပိုနေတယ်လို့ စွပ်စွဲမှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်နယ်ထရမ့် ဟာ အဓိ က စဉ်းစားရမယ့်အကြောင်းတွေမှာ သံအမတ်ကြီးနီကီဟာလေးနဲ့အတူ အ ချိန် ကုန်ဆုံးမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
ဒျေါနယျထရမျ့ နဲ့ သံအမတျကွီး နီကီဟာလေးကွား ခဈြသူပုံစံမြိုးရငျးနှီးတဲ့ ဆကျဆံရေးရှိနလေို့ သတငျးထှကျ
ကုလသမဂ်ဂဆိုငျရာအမရေိကနျ သံအမတျကွီး နီကီဟာလေးက သူအနနေဲ့ အမရေိကနျ သမ်မတ ဒျေါနယျထရမျ့နဲ့ ခဈြသူတှပေုံစံမြိုး အရငျးရငျးနှီးကြှမျးဝငျမှုတှရှေိနတေယျဆို တာတှကေမှနျကနျမှုမရှိဘူးလို့ ပွောလိုကျပါတယျ။
နီကီဟာလေးက ဒျေါနယျထရမျ့နဲ့ ပတျသကျလို့ ထှကျပျေါနတေဲ့ သတငျးတှေ ဟာ မှနျကနျမှုမရှိဘဲ ဝဖေနျတိုကျခိုကျမှုတှသောဖွဈကာ အဆငျ့မွငျ့ရုံးတှေ မှာ တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့အမြိုးသမီး မှနျသမြှ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ ပွသာနာဖွဈတယျလို့ပွောခဲ့ပါတယျ။
မကွာသေးမီ က ဒျေါနယျထရမျ့နဲ့ နီကီဟာလေးတို့ ရဲ့ပုံတှေ ဟာအှနျလိုငျးမှာပြံနှံခဲ့ပွီးသူတို့ နှဈဦးဆကျဆံရေး ဟာသာမနျထကျပိုနတေယျလို့ စှပျစှဲမှုတှရှေိနခေဲ့ပါတယျ။
ဒျေါနယျထရမျ့ ဟာ အဓိ က စဉျးစားရမယျ့အကွောငျးတှမှော သံအမတျကွီးနီကီဟာလေးနဲ့အတူ အ ခြိနျ ကုနျဆုံးမှုတှရှေိတယျဆိုတဲ့ ရေးသားထားတဲ့စာအုပျတှလေညျးထှကျပျေါနပေါတယျ။
Previous article တိုကျိုမြို့မှာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါးအတွင်းအအေးစံချိန်တင်ခဲ့
Next articleဒုံးအော့ကျေးရွာ ကမ်းပါးပြိုကျမှုကြောင့် ဒေသခံတွေကို ပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ လိုအပ်နေ